Huawei Matebook D नयाँ प्रोसेसर र ग्राफिक्स को साथ नवीकरण गरीएको छ ग्याजेट समाचार
Huawei Matebook D नयाँ प्रोसेसर र ग्राफिक्सको साथ नविकरण गरिएको छ
हुवावे स्मार्ट फोन वा मार्केटमा मात्र उपस्थित छैन ट्याब्लेटको एन्ड्रोइडको साथ। तर यसले विन्डोज १० अन्तर्गत ल्यापटपको क्षेत्रमा पहिलो चरणहरू पनि बनाउँछ। केही महिना अघि यसको सम्पूर्ण दायरा स्पेन आइपुग्यो: १ 10 इन्चको म्याटबुक एक्स; म्याटबुक ई २-इन -१ परिवर्तनीय र म्याटबुक डी दायरा, १.15,6..XNUMX इन्च स्क्रीनको साथ सबै भन्दा ठूलो.
खैर, २०१ well राम्रोसँग सुरू गर्न एशियाई कम्पनीले यी ल्यापटपहरूको प्राविधिक विवरण अपडेट गर्न चाहेको थियो। बाह्य डिजाइन उस्तै हो: एल्युमिनियम चेसिस र पातलोपनले उपकरणहरू २ किलोग्राम मुनि कुल वजन प्राप्त गर्दछ। थप रूपमा, यसको कुञ्जीपाटी प्रयोग गर्न सहज छ र यसको १ -..15,6 ईन्च स्क्रीनले अधिकतम पूर्ण एचडी रिजोलुसनको साथ आईपीएस प्यानल प्रस्ताव गर्दछ।
जहाँसम्म, सुधारहरू हामी हेर्ने छौं - वा सूचना बाहेक - भित्र। त्यहाँ Huawei ले पनी यसको Huawei Matebook D लडाई टीम को नवीनतम इंटेल प्रोसेसर (आठौं पुस्ता) छ भनेर सुनिश्चित गरेको छ। अधिक विशिष्ट हुन हामीसँग उपलब्ध हुनेछ इंटेल कोर i5-8250U र इंटेल i7-8550U प्रोसेसर। तिनीहरू मध्ये पहिलो २ 256 जीबी एसएसडी वा १२128 जीबी एसएसडी + १ टीबी एचडीडीको एक संकर कन्फिगरेसनको साथ हुन सक्छ, पोर्टल अनुसार GizmoChina। जबकि शीर्ष मोडेल केवल हाइब्रिड कन्फिगरेसन र GB जीबी रैमको साथ रोज्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, ग्राफिक भागले परिमार्जन पनि गरे। र यदि अघिल्लो संस्करण - एक कि अझै स्पेनमा बेचिएको छ - एक एकीकृत NVIDIA 940MX ग्राफिक्स कार्ड थियो, अब तिनीहरूले NVIDIA MX150 मोडेल जोड्नेछन् दुबै केसमा अन्तमा कम्पनी डेटाका अनुसार यस मोडेलको ब्याट्री 3.800 43,3,०० मिलिम्प्स क्षमता (.10 XNUMX..XNUMX WH) को साथ १० घण्टा सम्मको दायरामा हुनेछ। नवीकृत संस्करणको मूल्य अझसम्म खुलाइएको छैन, तर Huawei Matebook D को वर्तमान मोडेल तपाईं यसलाई 799। यूरोबाट पाउन सक्नुहुन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » ल्यापटपहरू » Huawei Matebook D नयाँ प्रोसेसर र ग्राफिक्सको साथ नविकरण गरिएको छ
हामी न्यूस्किलबाट निक्स हेडफोनको विश्लेषण गर्दछौं
वर्षको अन्त्यमा व्हाट्सएपले दुई प्लेटफार्महरूमा काम गर्न रोक्नेछ